Akwa mmiri Niger nke abụọ: Kedụ nke bụ eziokwu? - BBC News Ìgbò
Akwa mmiri Niger nke abụọ: Kedụ nke bụ eziokwu?
24 Mee 2018
Image copyright @FMPWH/Twitter
A na-arụ ọru na akwa Naija? Kedu ebe ọrụ ruru ugbua? Ọ bụ onyeisiala Muhammadu Buhari malitere ọrụ a ka ọ bụ onye bubu onyeisiala bụ Goodluck Jonathan?
Ebinyela aka n'akwụkwọ e ji arụ ọrụ a? Ọ bu asị ka ndị ndọrọndọrọ na-asịri ndị Igbo maka ụ akwa mmiri a?
Ajụjụ ndị a na ndi ọzọ bụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ banyere akwa mmiri ahu kwesịrị isi Asaba gafee osimiri ruo Ọnịcha.
Agha Kamerun achụbatala nde mmadụ abụọ n'Naijiria
Ụlọomeiwu ebinyela aka na Bọjetị 2018
Ajụjụ ndị a mezịri ka ọ dịzị ka a ga-asị na akwa a na-ekwu okwu ya bụ nrọ ka a na-arọ ya.
Mana eziokwu dị na ya bụ na ebe a ahazịrị a ga-arụ ya bu ọru dikwa na ihe, ọ dị n'Obosi di na Anambara steeti nakwa Asaba, bu isi obodo Delta steeti.
Ị nọrọ n'akwa nke ochie, ị ga-ahụ nke ọhụ a na-ese okwu, mana ihe mere bụ na akwa mmiri abụghị ihe a na-akọ akụkọ maka ya. Nke pụtara na ya kwụrụ, ndị mmadụ ga-agbara ya akaebe.
Etu ya bu akụko sịrị bido
Onye ọbula na-agba ụzọ Ọnicha (ma ọ na-aga aga, maọbụ ala ala) n'oge a na-eme nnukwu mmeme dịka Ekeresimesi maọbụ Ista ga-ama na akwa mmiri ahụ adịghi aba ụgbọala. Ndị mmadụ na-arahụ n'ụzọ ụfọdụ oge, mana ị nọọte aka n'ahịrị ụgbọla na-akwụ n'ọnụ akwa mmiri ahụ.
Nke a mere ndị mmadụ jiri na-eti mkpu na akwa ahụ adịghị mma, ọkachasị maka na ya bụ ụzọ bụ ụzọ e ji aba ala Igbo. Gọọmentị Naịjirịa kwuru na ọ dị mkpa ịrụ akwa mmiri ọzọ ma kwekwa nkwa na ọ ga-arụ ya.
Nkwa abughị ihe ekwere n'ọnụ. Nkwa sitere mgbe ndị agha ka nọ n'ọchịchị rute mgbe Olusegun Obasanjo, bu onye ndịagha nyere ọchịchị, kwukwara na akwa ọzọ ga-adị.
Gọọmentị Umaru Musa Yar'adua, bụ onye nọchịrị anya Obasanjo, tinyekwara ya ọnụ.
Mana, ọ bụ Goodluck Jonathan malitere ihe dị ka ọrụ n'ebe amapụtara a ga-arụ akwa mmiri a ka ndọrọndọrọ ọchịchi nke 2015 na-ekpo ọkụ.
Mgbe Jonathan gara ịhụ Obi Ọnịcha bụ Igwe Wilfred Achebe, ọ gwara ya na ọ ga-arụcha ọru n'akwa mmiri ahụ n'ime ọnwa iri na anọ.
Mana mgbe ọchịchị Muhammadu Buhari malitere, ha kwuru na onweghị ihe kwụ ọtọ na ya bụ ọgbọ ọrụ.
Ka oge gara, o mere ka ndị mmadụ echefụrụ maka ọrụ akwa, mana okwu ya bidokwara iwu ewu ka ndị ọrụ mgbasa ozi nke soshal midia nke gọọmentị zịpụrụ foto ha kwụrụ na-egosi ọrụ na-aga n'ihu n'akwa mmiri Naịja ke abụọ.
Soshal midia nwuru ọkụ ka ọtụtu ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ asị, na onweghị ihe ọbụla na-eme ebe ahụ.
Ihe Fashola Kwuru
Image copyright @FMPWH/ Twitter
Nkenke aha onyonyo Fashola gara mpaghara ọwụwa anyanwụ ileta ọrụ dị icheiche na-aga n'ihu ebe ahụ
Babatunde Fashola bụ Minista na-ahụ maka ọkụ, ọrụ na ụlọ gara Anambara ebe a na-earụ akwa mmiri ahụ ileru anya etu ya bụ ọrụ si aga.
Fashola gosiri igwe siri ike a na-eli n'ime ala e ji ewuli ya bụ akwa mmiri.
Image Copyright @FMPWH @FMPWH
N'akụkụ nke ya, onye na-elekọta ọrụ ahụ na-aga n'ihu bụ Patrick dugarịrị Fashola ma kọọwara ya etu ọrụ ahụ si aga.
Fashola kwukwara na a na-arụ ọtụtụ ọrụ iji hụụ na a na-eleta ya bụ akwa mmiri anya ma a rụchaa ya.
Fashola kwuru na ha ha arụọla ọrụ pasentị 50 itinye pila n'ala ga-ejide ya bụ akwa mmiri mana arụbeghi akwa mmiri ahụ na onwe ya.
Abụ m APC, APC bụ m- Okorocha
Iwu akwadoghi ikpe mmadụ ikpe n'azụ
Buhari akpọọla ndị omeiwu ndị umengwụ
Financial autonomy: Gọọmenti etiti enweghi ike ịkpachi ego steeti - Ekweremadụ
Etu Gọvanọ Ugwuanyi, Umahi na Ikpeazu siri gbaa ọsọ oroma n'afọ ise a
Ihe mere agaghị eji 'nọrọ n'ụlo' mee ncheta maka Biafra nke afo a
Ndị buterela coronavirus na Naịjirịa eruola mmadụ 8915